UDaniel Chambers-indlu entle yokuziphekela ebekwe ngaphakathi kwesakhiwo esilungiswe kakuhle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLatoya
UDaniel Chambers ungaphakathi kwesakhiwo esilungiswe kakuhle esikwidolophu enemigodi yaseCornish eCamborne.
UDaniel Chambers ligumbi elinye elinamagumbi amabini okuzenzela ukutya, elixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into ekufuneka uyidinga ngexesha lokuhlala kwakho; ifakwe ngokupheleleyo, enekhitshi esebenza ngokupheleleyo, kubandakanya umpheki, isitovu, imicrowave, izixhobo, umatshini wokuhlamba nokunye.
Kukho isicwangciso esivulekileyo sasekhitshini-yokuhlala-yokutyela, kunye nomabonwakude omkhulu wescreen esicaba kunye neempawu ezintle, kubandakanya neNetflix. Kukho igumbi elinye leshawari enkulu.
Igumbi lokulala linebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kunye neTV yayo enkulu yescreen esisicaba kunye neNetflix.
Sikwanayo nendawo yokupaka ekufutshane yeendwendwe zethu.
Singathanda ukuba nazi ukuba sinomsebenzi wokwakha oqhubekayo kwisakhiwo - indawo yakho yokuhlala igqityiwe - bayayigqibezela sonke isakhiwo.
Abakhi basebenza ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, 8am ukuya 5pm.
Igumbi lokulala linebhedi etofotofo kunye neTV yayo enkulu enescreen esisicaba kunye neNetflix.
Singathanda ukukwazisa ukuba sisenomsebenzi wokwakha oqhubekayo kwisakhiwo... ungakhathazeki, indlu yakho igqityiwe kwaye ilungele wena kwaye iipaseji zoluntu zigqityiwe kwaye zikhangeleka zihlakaniphile... abakhi basandula ukugqibezela amanye amagumbi nangaphandle ngasemva.
Uya kuva abakhi emini.
Le ndawo imnandi kubakhenkethi, njengoko umbindi wedolophu ekuhambo olulula, uneevenkile eziqhelekileyo kunye neevenkile zalapha ekhaya, iibhanki, ikhemesti kunye neevenkile ezinkulu, kunye nesikhululo sebhasi, isikhululo sikaloliwe kunye nerenki yeeteksi. Intle iSt Ives kukumgama omfutshane, kwaye iilwandle ezidumileyo zaseGwithian naseGodrevy zisondele ngakumbi!
Ukuba neyona ndlela iphambili ye-arterial, i-A30, kufutshane neendlela abatyeleli bethu banokufikelela ngokulula kwiindawo ezininzi zokuya eCornish.
Nokuba ungathanda ukutshiswa lilanga kunxweme olunegolide, uphonononga uhambo oluninzi oluselunxwemeni, utya indlela yakho ujikeleze iCornwall ukonwabela ukutya okumnandi okanye undwendwele imiboniso yobugcisa emininzi efumaneka eCornwall… siqinisekile ukuba uyakukuthakazelela ukuba kwindawo indawo esembindini ukuba le flethi ibonelela.
Umbuki zindwendwe ngu- Latoya